Sidee loo Qiyaasayaa Adeegyada SEO Adeegyada?
Aan ka bilawno raadinta shirkadda ugu caansan shirkadaha SEO. Caadi ahaan, rubucii koowaad ee ololaha suuq-geynta internetka waa wax aad u muhiim ah. Immisa ayaad diyaar u tahay in aad maalgeliso miisaaniyadda suuqgeynta? Maadaama ay jiraan hay'ado farabadan oo badan oo bixiya adeegyadooda shabakadda oo dhan, waqtigaasina waa mid asaasi ah. In kastoo aad weli ku socoto go'aanka saxda ah kharashaadka toddobaadyada (ama xitaa bilo) adoo samaynaya wicitaanada taleefanka, ama suurtagal ahaan, wada sheekaysiga e-mailka, tartamayaashaadu waxay horay u soconayaan,. Sidaa darteed, waa fikrad wanaagsan in la helo qaar ka mid ah shirkadaha SEO shirkadaha SEO sida ugu dhakhsaha badan. Siciradooda, si kastaba ha ahaatee, waa inay noqdaan kuwo macquul ah, oo aan si caadi ah u dhicin miisaaniyadda suuq-geynta suuqa ee xilliga bilowga hore.
Hadda waxaan isku dayi doonaa inaan aragnay arinta ka soo jeedda mashiinka raadinta, taas oo loo baahan yahay in la fahmo doorashadooda iyo dabeecadaha dabeecada marka ay abaalmarinayaan bogagga internetka oo leh darajooyin sare. First of all, aynu isku dayno in aan isweydiin su'aalo muhiim ah:
Maxaad filaysaa inaad leedahay shirkad SEO ah?
Miyaad ka fikireysaa SEO sida qof kasta oo ku xeeran?
Waxaa laga yaabaa in qaybtaada suuq-geyntaada ay ku adkaysato inaad ku orido?
Mise miyaad hubisaan arrinka, ujeedada sare u qaadista dakhligaaga boggaaga iyo bixinta dakhliga weyn ee mudada dheer?
Aynu keeno hal siman: shirkadaha shaqaalaynta shirkadaha SEO waxay u egtahay inay iibsanayaan baabuur. Haa, si dhab ah, doorashadaada waxay ku xiran tahay baahiyahaaga, quseya qiyaasta qiimaha guud ee ku saabsan wax-qabadka iyo helitaanka qiimaha miisaaniyadda suuqgeynta. Istaraatejiyada ugu fiican ee SEO ayaa ka bilaabanaya iyadoo lagu ogaanayo ujeeddadaada guud iyo baahida macaamiishaada mustaqbalka. Laga bilaabo ka soo horjeeda, adeegyada adeegsashada gawaarida raadinta raqiis ah waxay inta badan u egyihiin heshiis gorgortan. Haa, waxaad isku dayi kartaa inaad kaydiso lacag caddaan ah. Si kastaba ha noqotee, iyagaa kuu keeni doona.
Isla mar ahaantaana, ma jiro halbeeg marka ay timaaddo inaad doorato xirmida saxda ah ee shirkadda adeegga SEO. Soo jeedinta ugu muhiimsani waa in SEO aysan aheyn mid ku saabsan labadaba wax lagu qabanayo ama kaliya keenaya inay amarto. U fiirso sida daaweyn degdeg ah si aad u keento iibintaada iyo taraafikada noloshu waa hab qaldan. Markaad sidaa sameysid, waxaad dhumin doontaa kaliya lacagtaada. Waxyaabaha ay tahay in SEO ah oo wax ku ool ah ay tahay in ay kuugu keenaan ROI macquul ah: ma aha oo kaliya ku saabsan helitaanka darajooyinka SERP ka fiican oo bamgareynaya gaadiidka badan. Xaqiiqdii, yoolka kama dambaysta ah waa inuu macaamiishaada wali dib-u-kicin ku beddelno socodka weyn ee macaamiisha.
Sidaa daraadeed, sideebaad u heli doontaa ganacsiga iyadoon la horumarin adeega shirkadda SEO ee heer sare?
Ugu horreyntii, waa inay kaa caawisaa inaad xoogga saartid ujeedooyinka ugu muhiimsan, baahida, iyo dhibaatooyinka macaamiisha suurtogalka ah;
Ogaanshaha natiijooyinka ugu caansan ee laga filayo dadka dhagaystayaasha ka imanaya boggaga ganacsigaaga;
Ka caawiya aqoonsigaaga iyo hagaajinta qiimaha boggaaga;
Ku soo kabashada dhamaan dhinacyada faa'iidada ee suuqa ee ganacsigaagu ku lug leeyahay;
Ka hel khibrada user ee booqde kasta sida shakhsi ahaan ugu habboon, si loogu beddelo iibsadaha. Sidaa daraadeed, kharashka adeegyada SEO ayaa ku qeexaya natiijooyinka mantiga ee aad rabto inaad hesho, tayadooda, iyo sidoo kale mudada dheer. Sida muuqata, haysashada heshiis jaban macnaheedu waa helitaanka horumar aan caadi ahayn. Xusuusnow, waxa aad maalgelinayso maaha waxa lagaa qiimeeyo. ROI waxay si cad u qeexaysaa SEO Source . Shaki kuma jiro, adigoo leh 5, 10, ama xitaa 20 laab kordhaya dakhliga saafiga ah ee ka soo gala waxaad soo gashay waa sabab wanaagsan oo loola jeedo: oo aan waxba kuu qaban!